Iiveki ezingama-23 zokukhulelwa - uphuhliso lwama-fetal
Inyanga yesithandathu yokukhulelwa ihamba ngokugcwele. Ngalesi sikhathi umntwana useneminyaka engama-21. Kwimeko yomzimba kunye nomoya womama ozayo, kukho utshintsho olubonakalayo. Isisu sisetyenziswe ngokukhawuleza, ngenxa yokunyuka kwevolitium yamniotic fluid. Ukwandisa, kukho ukucotha xa uhamba.
Uphuhliso lomntwana kwiiveki ezingama-23 lusebenza kakhulu. Ingane ikhula ngokukhawuleza - yenziwe ngamathambo angaphantsi. Ngeveki isiqhamo singongeza kwi-100 g. Ngokweedata ezilinganiselweyo, ubunzima bomntwana bunokuhluka ukusuka kuma-450 ukuya ku-500 g kwaye ubude bomzimba buyi-25-29 cm. ngeveki, uyakwazi ukukhula, endaweni ethile i-1 cm. Ngobukhulu bayo, isiqhamo singathelekiswa nesitshalo seqanda.
Ukubonakala kweemvuthu kuseyona into engavamile - obomvu, obomvu kunye nosana oluncinci. Kodwa ngexesha elifanayo, sele livele lenziwe kakuhle.
Ukuguquka kwemvelo. Ukuphuhliswa kwe-Fetal kwiveki yama-23 yokukhulelwa kumvumela ukuba avele izandi ezijikelezayo. Umntwana unokukwazi ukwahlula phakathi kwamazwi. Uninzi kunabo bonke, unina unqabise ilizwi lakhe. Izandi ezinamandla zinokubangela i-alamu kunye nokunyuka komsebenzi.
Yenza ngokusemthethweni inkqubo yokutya. Isisu, isisu, isinyithi esincinci nesincinci silungiselwe umsebenzi wesikhathi esizayo. Nangona kunjalo, isihlalo sokuqala somntwana sibonakala kuphela emva kokuzalwa kwakhe.
Inkqubo yesithambo ikhula ngokukhawuleza. Yakha ngokukhawuleza i-marigold yokuqala. Umzimba omncinane uqala ukugubungela uLanugo - i-fuzz yokuqala emnyama emzimbeni womntwana.
Iinkqubo zokuphefumula kunye neentloko ziqhubeka nokwenza. Ingqondo kwiinyanga ezintathu ezedlulayo ikhula ngokuvakala ngaphezu kwamaxesha angama-10! Kodwa ngokuphuhliso olufanelekileyo, kubaluleke kakhulu ukuba kukho oksijini okwaneleyo. Kulo mama ozayo kuyimfuneko ukufumana ixesha lemihla yokuhamba ngaphandle. Kufuneka kukhunjulwe ukuba nayiphi na imeko exinzelelekileyo ingakhokelela kwindlala yomoya, eya kuba nemiphumo emibi.
Ubume bentshukumo ye-fetal nayo ayihlali ingatshintshi. Umsebenzi uba ngakumbi. Oomama abaninzi banokuziva benomlenze, ingalo okanye umlenze wengane. Ngamanye amaxesha kunokubangela ukuba umama angakhathazeki. Ngomnye umntwaba unomuzwa wokungabikho ngokuzikhethela okanye udibanise intambo.
Ukuzibonakalisa kokukhula kobantwana kungama-23-24 kwiiveki kukuba ininzi yexesha achithayo ephupheni. Phantse nganye iyure umntwana uyavuka kwaye uzive evezwe ngamajolts and perturbations. Emva koko, emva kokuvuka okufutshane, kwakhona ulala. Ngako oko, kwindlela eqhelekileyo yokukhulelwa, ngemini, unokubala ukunyuka kwe-10 kunye nokuthuthumela komntwana. Kuyathakazelisa, ngokucwangcisa uphando lwezenzululwazi, ukuphuhliswa komntwana emva kweeyure ezingama-22-23 sele kumvumela ukuba acinge ngamaphupha.
Yintoni eyenzeka kumama wesikhathi esizayo?
Imeko yomama ishintsha. Inzuzo yesisindo ngeveki 23, ngokwemyinge, isuka kwi-5-8 kg ukusuka kwisisindo sayo sokuqala. Izinwele zibonakala zikhudlwana kwaye zihle kakhulu, ikhumba likhanya ngempilo. Kodwa ngelo xesha, ukuxhalabisa okungakumbi kunokubangela ukugubha, ukuxakeka emilenzeni, intlungu kwi-sacrum. Zama ukutya ngokufanelekileyo kwaye ugweme ukukhathala ngokomzimba okungadingekile.
Njengomthetho, ngeveki yama-23 yokukhulelwa abazali abaninzi baya kuqonda ngesondo lomntwana ongakazalwa ngenxa ye- ultrasound.
Kubalulekile ukuba uphuhliso lokukhulelwa ngeveki ezingama-23 luqhubeke kwiimeko ezifanelekileyo. Ukuxhaswa kwabathandekayo kuya kunceda ukudala intuthuzelo ethile yengqondo. Kufuneka ukhunjulwe ukuba amathuba okusinda azalwe kwiiveki ezingama-23 ancinane kakhulu - i-16% kuphela. Ngoko ke, isimo sengqondo esilukeleyo umzimba wakho - ukutya okunomsoco, ukuhamba ngaphandle, ukuzinza kwengqondo kunye nokuzivala kakuhle, kuya kunceda ukuzonwabisa ngeli nqanaba lokukhulelwa.
Ukugcinwa kokulondolozwa kwe-varicose ngexesha lokukhulelwa
Iiveki ezingama-21 zokukhulelwa - i-ultrasound
Ingaba kunokwenzeka ukuba abafazi abakhulelwe babe isithombo?
Iindlela zokuguquka ngexesha lokukhulelwa
Ukuhamba ngexesha lokukhulelwa
Ukungenakwanela kwamaplahla - iimpawu
Yintoni engakwazi ukukhulelwa esemncinci?
Ukutshatyalaliswa kokukhulelwa kwangaphambili
Fraksiparin ngexesha lokukhulelwa
Uvavanyo lokukhulelwa - uluhlu
Yintoni uMiley Cyrus Barack Obama?
Unokuhlala phi iwele?
I-tincture hemlock-4 zokupheka zokupheka kunye nezicwangciso ezine-sicelo eziyimfihlo
INkosana uGeorge yenza ukulinganiswa kwabantwana abanomdla kakhulu
Imibala ephakathi kwendlu
Ukufakwa kwindlu yangasese
Ukwazisa izihlalo ngezandla zabo
14 abalawuli abanobukhohlakele bama-Middle Ages
ETurkey ukupheka kwi-oven - recipes
I-Neumyvakin - unyango nge-soda kunye ne-peroxide ye-hydrogen kanyekanye
Intombi eneminyaka eyi-14 uCindy Crawford yaba ubuso be-Chrome Heart
Utamatisi oluhlaza - luhle kwaye lubi
Ama-Whitening amaqatha amazinyo
Umhlaza wesifo - iimpawu kunye neempawu
I-Eosinophil yinto evamile
Indlela yokuba ngumfazi onoyolo?
I-Trubchev Icon yoMama kaThixo-bafuna ukuthini?
Uxinzelelo lobugcisa - izizathu kunye nezindlela zokunqoba
Inhalation nge pharyngitis